Huawei P30 Pro na Mate X wepụrụ na weebụsaịtị nke Android | Gam akporosis
E wepụrụ Huawei P30 Pro na Mate X na weebụsaịtị webụsaịtị gọọmentị
Ihe si na ya pụta Mmachibido iwu Google na Huawei, n'ihi veto nke United States nyere ụlọ ọrụ China, ọ na-aga n'ihu na-abawanye ma pụta ìhè na ụbọchị na-agafe, n'agbanyeghị ọnwa atọ ekwupụtala ọkwa.
N'ime ohere ọhụụ a, gam akporo, nke Google nwere, ewepụla na weebụsaịtị ya abụọ kachasị ngwa ọrụ akara ngosi nke Huawei: al P30 Pro na Mate X, ya mbụ foldable ama mara ọkwa na February na akabeghị aka ahịa. Nke a mere ozugbo emechara Nwunye 20 Pro iwepụ na gam akporo Q beta.
Mgbe anyị na-eche ma ọ bụrụ na Huawei ka nwere ohere ịzọpụta onwe ya ma pụọ ​​na oke ọhịa a niile nke nsogbu ndị dakwasịrị ya, ma gịnị ha hụrụ onwe ha ka ha na-abịaỌ dị ka ihe niile ọ na - emegide ya, na - enweghị nkwụsịtụ na nwayọ. Anyị na-akwado nke a site na arụmọrụ a site na gam akporo, nke, n'ụzọ zuru ezu, nwere wepụrụ P30 Pro na Mate X na weebụsaịtị ha dịka ụfọdụ n'ime mobiles kachasị mma na mpaghara ha.
Tupu nke a emee, Mate X bụ otu n'ime ọdụ 5G kachasị ama na saịtị ahụ, nke ugbu a bụ naanị ndị Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G na Xiaomi My Mix 3 5G.
Huawei P30 Pro, ka ọ dị ugbu a, nọ na ngalaba nke ndị nwere kamera ka mma, olee otu ọ ga - esi bụrụ na ọ bụghị. O kwesiri ekwesi na o nwere Google Pixel 3na Motorola Moto G7 na OnePlus 6T, ngwaọrụ ndị pụtakwara maka ike foto ha.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ dị ka nke ahụ E wepụrụ Huawei na ndepụta nke ụdị ndị kachasị elu, ma anyị ejighị n’aka ma ọ bụrụ na nke a machibidoro mmachi ahụ. Ugbu a ndepụta ahụ gụnyere Samsung, LG, Motorola, Google, Nokia, na Xiaomi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E wepụrụ Huawei P30 Pro na Mate X na weebụsaịtị webụsaịtị gọọmentị
Lenovo adịghị ezube ịzụlite usoro sistemụ na ibe ya
Facebook ewepuola ijeri akaụntụ 2.000 adịgboroja n'afọ a